DEG DEG:- Kulan albaabada u xiran oo haatan ka socdo garoonka C/laahi Yuusuf ee magaalada Gaalkacyo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Kulan albaabada u xiran oo haatan ka socdo garoonka C/laahi Yuusuf ee magaalada Gaalkacyo
Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in goordhaw uu halkaasi gaaray Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating.
Michael Keating ayaa garoonka diyaaradaha C/laahi Yuusuf ee magaalada Gaalkacyo kulan albaabada u xiran kula qaadanaya madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali.
Kulankaasi ayaa la sheegayaa inay labada dhinac uga hadlayaan arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sida loo xoojin karo heshiiskii xabad joojinta aheyd iyo sidii magaalada Gaalkacyo dib loogu soo celin lahaa dadka ka barakacay.
Michael Keating ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu halkaasi kulamo kala duwan kula qaato madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed iyo ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke.
Dhamaan kulamadaan maanta ka socda garoonka diyaaradaha C/laahi Yuusuf ee magaalada Gaalkacyo ayaa ah kuwo lagu xoojinayo heshiiskii xabad joojinta aheyd ay kala saxiixdeen madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Puntland, iyadoona ilaa iyo haatan la ogeyn in heshiiskaasi uu dhaqan gali doonno iyo inkale.
Dhowr jeer oo hore ayaa heshiis ay labadaasi dhinac kala saxiixdeen fashilmay, wuxuuna Michael Keating shaki weyn ka qabaa in heshiiskaasi uu dhaqan galo, isagoona xilli kasta baaqyo kala duwan kasoo saaro dhaqan gelinta heshiiiskaas oo weli wax horumar ah ka muuqan.